မီးလောင်ခဲ့သည့် ဆိုင်ခန်း ၁,၆၀၀ ခန့်အနက် အများစုမှာ ဆေးနှင့် ဆေးပစ္စည်းဆိုင်များနှင့် အလှကုန်ဆိုင်များ ဖြစ်ကြသည်။
မင်္ဂလာဈေးမီး နံနက် ၇ နာရီကျော်တွင် ထိန်းချုပ်နိုင်
အချက်အချာကျသည့် မင်္ဂလာဈေးကြီးတွင် ဒုတိယအကြိမ် လောင်ကျွမ်းခဲ့သော မီးဖြစ်သည်
ဆန္ဒပြမှုများကြောင့် ထိုင်းသံရုံး ကောင်စစ်ဝန်ဌာန ဆက်လက်ပိတ်ထား
သံရုံးတွင်းသို့ လုံခြုံစွာ ဝင်ထွက်သွားလာနိုင်ရန် အာမခံချက် ရရှိသည့်အချိန်တွင် ကောင်စစ်ဝန်ဌာနအား ချက်ချင်း ပြန်လည်ဖွင့်လှစ်မည်
သီလဝါတွင် မလေးရှားက ကတ်ထူပုံးစက်ရုံ ဆောက်မည်
ရန်ကုန်၊ ဇန်နဝါရီ ၈ မလေးရှားနိုင်ငံရဲ့ အကြီးဆုံး ကုန်ပစ္စည်းထုတ်ပိုးမှုကုမ္ပဏီများထဲက တစ်ခုက ရန်ကုန်မြို့ အရှေ့တောင်ဘက်မှာရှိတဲ့ သီလဝါအထူးစီးပွားရေးဇုန်အတွင်း စက်ရုံ တည်ဆောက်သွားမယ်လို့ ကြေညာခဲ့ပါတယ်။ ကတ်ထူပုံးတွေ ထုတ်လုပ်တဲ့ Box-Pak အမည်ရတဲ့ မလေးရှားကုမ္ပဏီဟာ သီလဝါအထူးစီးပွားရေးဇုန် (SEZ) မှာ မြေဧက ၁၈ ဒသမ ၅.
ဝန်ကြီးဌာနသုံးခု၏ ဘတ်ဂျက်မှ ကျပ်သန်း ၁,၀၀၀ ကျော် ဖြတ်တောက်
အားကစား၊ ယဉ်ကျေးမှုနှင့် ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာနတို့၏ ၂၀၁၆-၁၇ ဘတ်ဂျက်များကို ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် ဖြတ်တောက်
မြန်မာအလုပ်သမားများ ခေါ်ယူရန် ထိုင်ဝမ် အတည်ပြု
မြန်မာနိုင်ငံက လုပ်သားများကို ယခုနှစ်အတွင်း ခေါ်ယူသွားမယ်လို့ ထိုင်ဝမ်အစိုးရက အတည်ပြုကြေညာခဲ့ကြောင်း ထိုင်ဝမ်နိုင်ငံပိုင် သတင်းဌာနဖြစ်တဲ့ Central News Agency က ပြီးခဲ့တဲ့ ရက်သတ္တပတ်က ဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ မြန်မာလုပ်သားများကို ယခုနှစ် ပထမနှစ်ဝက်အတွင်း ခေါ်ယူသွားမှာ ဖြစ်တယ်လို့ ဒီဇင်ဘာ ၃၁ ရက်က Commercial Times.
ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲကို ခြောက်လအတွင်း ကျင်းပနိုင်ရန် လွှတ်တော်နှစ်ရပ် အတည်ပြု
လွှတ်တော်နှစ်ရပ်လုံးက သဘောတူညီခြင်းကြောင့် ပြည်ထောင်စု လွှတ်တော်က အတည်ပြုသည်ဟု မှတ်ယူရမည် ဖြစ်သည်